January 12, 2015 | Internet Journal
ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ အသက်အရွယ်ကြီးမြင့်သူများသည် Facebook ကို ပိုမိုအသုံးပြုလာပြီး လူငယ်များစွာက Instagram ကို အသုံးပြုမှု များပြားလာနေကြောင်း Pew သုတေသနစင်တာမှ ထုတ်ပြန်သွားခဲ့သည်။ အင်တာနက်အသုံးပြုသူ အသက် ၆၅ နှစ်အထက် လူကြီး ၅၆ ရာခိုင်နှုန်းသည် Facebook ကို အသုံးပြုနေကြပြီး ၎င်းအနက်မှ ၃၁ ရာခိုင်နှုန်းသည် အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ လူကြီးများ၏ Facebook အသုံးပြုသည့် နှုန်းဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ စစ်တမ်းတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။ Selfie ဓာတ်ပုံရိုက်ကူခြင်းကို နှစ်သက်ကြသည့် အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၂၉ နှစ်အရွယ်အထိ လူငယ်လူရွယ် ၅၃ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည် Instagram ကို အသုံးပြုကြကြောင်း စစ်တမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းသုတေသနစစ်တမ်းတွင် Instagram, Twitter, Pinterest နှင့် […]
v6.67 မြေပုံကစလို့ ယခု နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ v6.83 မြေပုံအထိ Update တိုင်းမှာ မပါမဖြစ်ပါလေ့ရှိပြီး Major Change, Minor Change များ မကြာခဏ ပြောင်းပေးနေရသည့်တိုင် ခေတ် အဆက် ဆက် ပြောင်းလဲနေတဲ့ Meta များအရ လူကြိုက်များတဲ့ Carry Hero တစ်ကောင်အဖြစ် ရပ်တည်လျက်ရှိတဲ့ Terrorblade The Demon Marauder ဟာ Dota 1 တုန်းက Anti-Mage နဲ့ ညီအစ်ကို ဖြစ်ခဲ့ဖူးသော Soul Keeper လို့ လူသိများတဲ့ Hero တစ်ကောင် ဖြစ်ပါတယ်။ Dota 1 တုန်းက Sand King, Skeleton King နဲ့ Soul […]
Ubuntu OS တွင် Budgie Desktop Environment ကို ထည့်သွင်းခြင်း
Ubuntu OS အသုံးပြုသူတွေ အနေနဲ့ ပုံမှန် အသုံးပြုနေကျ Desktop ရဲ့ သွင်ပြင်ကို အသုံးမပြုချင်တော့ဘူး ဆိုရင် Budgie ကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Budgie မှာပါဝင်တဲ့ထူးခြားတဲ့သွင်ပြင်နဲ့ သုံးစွဲသူ စိတ်တိုင်းကျစေမယ့် icon အမျိုးအစားတွေကို Gnome3ပေါ်မှာ အခြေခံကာ ပြုလုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Budgie ကို ထည့်သွင်း အသုံးပြုလိုတယ်ဆိုရင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ပြုလုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Budgie Desktop Environment ကိုထည့်သွင်း အသုံးပြုဖို့အတွက် ပထမဆုံး Ubuntu OS System ရဲ့ Package တွေကို Update တွေ၊ Upgrade တွေ ပြုလုပ်ထား သင့်ပါတယ်။ Package တွေကို […]
Colors Mobile Signing Ceremony
Colors Mobile Signing Ceremony ကိုတော့ ဇန်န၀ါရီလ ၄ ရက်နေ့က နီပေါနိုင်ငံ Tele Talk Pvt. Ltd.တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ အခမ်းအနားမှာ Tele Talk Pvt. Ltd. မှ မန်နေဂျင်းဒါရိုက် တာ Mr. Pratik Jalan နှင့် UMT Distribution Group မှ မန်နေဂျင်း ဒါရိုက်တာ ဦးမျိုးမင်းသူတို့မှ Colors Mobile ၏ မြန်မာပြည် တစ်ဦးတည်း ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ခန့်အပ်ကြောင်း နှစ်ဦးသဘောတူ လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။
ASUS H81-Gamer Motherboard
Intel Socket 1150 ၏ H 81 Chipset ကို အသုံးပြုထားသည့် 4th Generation Gaming Motherboard ဖြစ်သည်။ Intel Core i7 အထိ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကောင်း ဆုံး မြှင့်တင်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Memory အနေဖြင့် Stock ၄ ချောင်းပါရှိပြီး 16GB DDR3 1600/1333 အထိ ထောက်ပံ့ပေးမည် ဖြစ်သည်။ Graphic Support အနေ ဖြင့် resolution 1920 x 1200 အထိ ရုပ်ထွက်ကို အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ပေးမည် ဖြစ်သည်။ Data transfer အနေဖြင့် USB 3.0 ကို အသုံးပြု ပေးထားပြီး SATA6[…]
လက်ရှိဖွင့်လှစ်နေသော သိပ္ပံ၊ ကျောင်း၊ သင်တန်းများ လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်သို့ တိုက်ရိုက် ဝင်ရေ
လက်ရှိ ဖွင့်လှစ်နေသော သိပ္ပံ၊ ကျောင်း၊ သင်တန်းများအား လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်သို့ တိုက်ရိုက် ဝင်ရောက်နိုင်ရန် ကျွမ်းကျင်လုပ်သား ဈေးကွက်များနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ညှိနှိုင်း လေ့ကျင့်ပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာကိုကိုဦးက ပြောသည်။ နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာကဏ္ဍ တိုးချဲ့မြှင့်တင် အကောင်အထည်ဖော်ရေး အထူးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအဝေးသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက တက်ရောက် အမှာစကားပြောကြားရာတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။ အမျိုးသားပညာရေး နည်းဥပဒေကို ပြ ဋ္ဌာန်းနိုင်ရေး အတွက် ရေးဆွဲလျက်ရှိကြောင်း၊ အမျိုးသားပညာရေး နည်းဥပဒေတွင် ပါဝင်မည့် နည်းပညာနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို မူဝါဒ၊ ဥပဒေ များနှင့် အညီ ထည့်သွင်းရေးဆွဲ လုပ်ဆောင်သွားရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ပြောကြားခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်အသီးသီးတွင် […]
ဇန်နဝါရီလ အတွင်း မော်တော် ယာဉ် ဆိုင်ရာများ နယ်လှည့် ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်
ဇန်နဝါရီလအတွင်း မော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ရာများ နယ်လှည့်ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်ကို ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီး ၁၃ ခုတွင် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလအတွင်း နယ်လှည့်၍ မော်တော်ယာဉ်၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် သက်တမ်းတိုးခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်၍ ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်ရန် အသိပေးကြေညာထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဆောင်ရွက်မည့်နေရာများအဖြစ် နေပြည်တော်တွင် လယ်ဝေး၊ ကချင်ပြည်နယ်တွင် တနိုင်း၊ မိုးကောင်း၊ ကရင်ပြည်နယ်တွင် ဖာပွန်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် ချောင်းဦး၊ မြောင်၊ ကျွန်းလှ၊ မြို့သစ်တို့ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွင် တနင်္သာရီ၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတွင် ပေါင်းတည်၊ မိုးညို၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် ရေနံချောင်း၊ နတ်မောက်၊ ရေစကြို၊ ပွင့်ဖြူ၊ အောင်လံ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် မိုးကုတ်၊ မွန်ပြည်နယ်တွင် မုဒုံ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ကျောက်တော်၊ မြောက်ဦး၊ […]
Mi Power Bank တစ်မျိုး နေပြည်တော်ဈေးကွက်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာသည်။ သိုလှောင်မှုပမာဏမှာ 10400mAh ဖြစ်သည်။ အရောင်ပိုင်းအတွက် စုံလင်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပြီး ကိုယ်ထည်ကို Aluminium-Alloy ဖြင့် တည်ဆောက်ပေးထားသည်။ အရည်အသွေးမြင့် Premium Li-On ဘက်ထရီကို အသုံးပြုထားသည့်အတွက် အားတည်ရှိမှု ကြာရှည်ခံသည်ဟု သိရသည်။ အပူထိန်းချုပ်မှုစနစ်အပြင် အခြားသော အဆင့်မြင့် လုပ်ဆောင်ချက်များ ပါဝင်သည့်အတွက် input/output အားသွင်းလွန်ကဲမှု၊ ရှော့ခ်ဖြစ်ပွားမှု၊ အားအလွန်အကျွံပြန်သွင်းမိခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ပြဿ နာများကိုလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်မည်ဟု သိရသည်။ အားသွင်းမှု/ အားလက်ကျန်အတွက် Battery Level ကို LED မီးသီးလေးလုံးဖြင့် ပြသပေးမည် ဖြစ်သည်။ Input DC5V- Output 5.1V 2.1A ဖြစ်ပြီး အားအပြည့်ပြန်သွင်းမည်ဆိုပါက ၅.၅ […]